Home Wararka Shil gaari oo khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada Borame
Shil gaari oo khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada Borame
Sida ay sheegayaan Wararka ka imaanaya magaalada Boorame, Shil gaari ayaa ka dhacay duleedka Magaalada Boorama ee Xarunta Gobolka Awdal ee Somaliland.
Shilkaan ayaa la sheegyaaa in uu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac. Shilkaan ayaa waxaa uu yimid, kadib markii gaari nooca Baska iyo mid kale oo raaxa ah ay isku dhaceen oo ku socday xawaara sare, xili ay iskaga hor yimideen agagaarka Bar koontarool oo ku taalla duleedka Magaalada Boorama.
Waxaa la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyooday shilkaas dhacay, halka 7 qof kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu warbaahinta u sheegay Taliyaha Ciidanka ilaalada Boorama ee Somaliland Maxamed Nuur Qolombi.
Previous articleCiidamo kawada tirsan DFS oo is-rasaaseeyay iyo Khasaare ka dhashay
Next articleQaar kamida Nabadoonada iyo cuqaasha Gobolka Nugaal oo digniin u diray MW Dani
Qaar kamida ragii lagu eedeyay dilkii Gud. Dhaga-juun oo la...